XOG: Kooxihii Lacagta Ugu Badan Suuqa Geliyey Tan Iyo 2010-kii, Real Madrid, Man United, Barcelona, Chelsea Iyo PSG Oo Lagu Garaacay + Halkee Ayey Liverpool, Juventus Iyo Arsenal Kaga Jiraan Liiska? – GOOL24.NET
Sayladda iibka ciyaartooyada ayaa si weyn isku beddeshay siddeedii sannadood ee u dambeeyey, waxaana kooxaha waaweyn ee qaaradda Yurub ay ciyaartooyo ku iibsadeen lacago ka badan dakhliga dalal badan oo dunida hore ugu maray soo gala sannadkii.
Labaatanka kooxood ee lacagta ugu badan suuqa geliyey laga soo bilaabo sannadkii 2010 oo aanu halkan idiinku soo bandhigayno, ayaa waxa kaalmaha hore kaga jira naadiyada ka dhisan waddanka Ingiriiska, hase yeeshee waxa loollanka lacag bixinta kula jira naadiyada horyaallada Spain, Italy, Germany iyo France.
20-ka naadi ee lacagtii ugu badnayd kharash gareeyey muddadaas siddeedda sannadood ah, toddoba ka mid ah ayaa suuqa geliyey lacag ka badan hal bilyan oo ay ciyaartooyo kusoo gateen, hase yeeshee kuwa kale ayaa iyaguna malaayiin Gini ku soo iibsatay ciyaartooyo ay isku tayaynayeen.
Layaabka xogtan kasoo baxay ayaa ah in naadiga Everton ee ka dhisan waddanka Ingiriisku uu ka batay Bayern Munich oo horyaalka Germany sannado badan si xidhiidh ah u qaadanaysay marka la eego lacagta ay suuqa geliyeen ee ciyaartooyada ay kusoo iibsadeen.
Sida xaqiiqadu tahay, horyaalka Premier League oo lagu tilmaamo ka ugu adag wakhtigan ayaa ay kooxuhu ka helaan lacago badan xayaysiinta iyo baahinta Telefishanada, waxaanay taasi ka caawisaa inay awood u yeeshaan inay ciyaartooyo badan oo qaali ah soo iibsadaan. Taasina waxay keentay, in naadiyada Juventus, Bayern Munich iyo PSG oo sannadihii ugu dambeeyey aanay cidina ku qabsanin horyaallada Serie A, Bundesliga iyo Ligue 1 lagu garaaco kharash-garaynta lacagta ku baxda ciyaartooyada suuqa laga doonto, laakiin kaligood kuma ah, waxaase iyagana laga sare maray Real Madrid iyo Barcelona oo beryaha qaarkood kaalmaha koowaad ku jiray.
Halkan kaga bogo liiska lacagaha ay kooxuhu ciyaartooyada ku iibsadeen tan iyo sannadkii 2010
5) Manchester United (€1.10bn)
4) PSG (€1.24bn)
3) Barcelona (€1.25bn)
2) Chelsea (€1.31bn)
1) Manchester City (€1.47bn)